अस्ताए डा.देवकोटा, को हुन् उनी ?उपचार कक्षमा सोमबार साँझ पाँच बजेर पैंतिस मिनेटमा निधन ~
- नेपाली सन्देश मङ्लबार, असार ५, २०७५ , 3.7K जनाले हेर्नुभयो
काठमाडौं : प्रख्यात न्युरो सर्जन प्राध्यापक डा. उपेन्द्रप्रसाद देवकोटाको सोमबार साँझ निधन भएको छ । पित्त थैलीको क्यान्सरबाट पीडित डा. देवकोटाको आफैले स्थापना गरेको बाँसवारीस्थित न्युरो अस्पताल (नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एप्लाइड साइन्स) को सघन उपचार कक्षमा सोमबार साँझ पाँच बजेर पैंतिस मिनेटमा निधन भएको हो ।
गत वैशाख १५ गते बेलायतमा उपचार गर्दागर्दै रोग निको नहुने थाहा पाएपछि उनी स्वदेशमै देह त्याग गर्ने इच्छाअनुसार नेपाल फर्केका थिए ।
पुख्र्यौली घर गोरखा पुगेर फर्किएको नौ दिनपछि डा. देवकोटाको निधन भएको हो ।२०१० साल पुस ४ मा गोरखाको पण्डित गाउँमा जन्मिएका डा.देवकोटा ६५ वर्षका थिए । उनको निधनपछि पत्नी मधु दीक्षित देवकोटा, तीन छोरीहरू मेघा, वसुधा र मञ्जरीसहित आफन्तजन शोकमा डुबेका छन् ।
अस्पतालमा उपचाररत अन्य बिरामी र आफन्तसमेत स्तब्ध देखिन्थे । अस्पताल पुगेका सीमित फोटो पत्रकारलाई डा. देवकोटालाई राखिएको कक्षमा तस्बिर नखिच्न अनुरोध गरिएको थियो । उनका बारेमा केही नबोली अस्पतालबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति लिएर जान अस्पतालबाट आग्रह समेत गरिएको थियो ।
डा.देवकोटाको पार्थिव शरीरलाई मंगलबार अस्पतालको प्रांगणमा बिहान आठ बजेदेखि दिउँसो एघार बजेसम्म श्रद्धाञ्जलिका लागि राखिने भतिजा तथा न्युरो अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त देवकोटाले जानकारी दिए । श्रद्धाञ्जलिपछि नारायणगोपाल चोक चक्रपथ हुँदै पशुपति आर्यघाटमा लगी विद्युतीय शवदाह गृहमा दाहसंस्कार गरिने छ ।
डा.देवकोटाको निवास हेपाली हाइटमा पत्नी देवकोटा र तीन छोरीले काजक्रिया गर्ने भएका छन् । उनको काजक्रिया सात दिनमा सम्पन्न गर्ने बताइएको छ ।
उनको निधन भएलगत्तै सहपाठी एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बेजोड चिकित्सक र नेपाली आमाका सुयोग्य सपुतको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘ नेपाल आमाका सुयोग्य सपुत तिम्रो सम्झना नेपाली इतिहासले लामो समयसम्म गरिरहने छ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
परिवारजनमा गहिरो समवेदना ।’ उनीहरू दुवै गोरखाको अमरज्योति हाइस्कुल र अमृत साइन्स क्याम्पसमा झण्डै आठ वर्ष सहपाठी हुन् । भट्टराईले डा. देवकोटालाई मेधावी सहपाठीको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
वीर अस्पताल राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रा.डा गणेश गुरुङले नेपालमा आधुनिक न्युरो सर्जरीको सुरुवात गर्ने र न्याम्सलाई कानुनी वैधता दिने कार्य गरी चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको स्मरण गरेका छन् ।
वीर अस्पतालमा न्युरो सर्जरी विभागको स्थापना गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मान्यता दिलाउनमा डा. देवकोटाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विस २०५९ सालमा उनकै सक्रियतामा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले न्याम्सलाई वैधता दिलाउन सफल भएका थिए ।
न्युरो अस्पतालका संस्थापक देवकोटाको निधन भएको जानकारी दिँदै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आखिरी अवस्थासम्म सेवा गर्न पाएकोमा गर्वानुभूति गर्दै उपचारमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक समुदाय तथा स्वास्थ्यकर्मीमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।
उनको मृत्युबाट भएको गहिरो पीडालाई आत्मसात गर्दै उनको पदचापलाई नै प्रेरणाको रूपमा अनुशरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत अस्पतालले व्यक्त गरेको छ ।
जन्म : २०१० पुस ४
निधन: २०७५ असार ४
एमबीबीएस उत्तीर्ण : २०३० साल
वीर अस्पतालमा सेवा सुरु : २०३१ साल
वीर अस्पतालमा न्युरो सर्जरी वार्ड स्थापना : २०३८
न्युरो सर्जरीमा एफआरसीएस गर्न बेलायत प्रस्थान : २०४०
न्युरो सर्जरीमा दक्षता हासिल गरी स्वदेश फर्किएर वीरमै सेवा सुरु : २०४७
स्वास्थ्य मन्त्री :२०५९ असोज २५
वीर अस्पतालमा न्युरो
चार दशकदेखि बिरामीको सेवामा संलग्न डा. देवकोटाले भारतबाट एमबीबीएस गरेका थिए । २०३१ सालमा नेपाल फर्किएपछि उनले वीर अस्पतालमा सेवा सुरु गरेका थिए । वीर अस्पतालका सर्जरी विभागका तत्कालीन प्रमुख डा. दिनेश गंगोलको मातहतमा रहेर उनले कार्य गरेका थिए । त्यसअघि उनले केही समय शिक्षण अस्पताल महराजगन्जमा लेक्चररका रूपमा काम गरे ।
न्युरो सर्जरीमा नयाँपन दिने काममा अगुवाइ गरेका डा. देवकोटाले नेपाली चिकित्सामा न्युरो सर्जरीलाई उचाइमा पु¥याउने काम गरे ।
उनी व्यक्तिगत रूपमा सरल, स्वाभिमानी र देशभक्त मानिन्थे । उनले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरे, स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याए ।
उनले सन् १९६१ मा वीर अस्पतालमा डा. दिनेश गंगोलसँग मिलेर मस्तिष्कको सर्जरीको सुरुवात गरे । त्यसको दुई दशकपछि नै सन् १९८१ मा भेलोरका केभीमथाईर डा. गंगोलसँग मिलेर ६ शैय्याको न्युरो सर्जरी वार्ड स्थापना गरे ।
डा . देवकोटाले आधुनिक न्युरो सर्जरीको सुरुवात भने १९८९ फेब्रुअरीमा गरेका थिए । २०५९ असोज २५ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित नौ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा उनी सात महिना स्वास्थ्य र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए । उनले २०६२ सालमा बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालको स्थापना गरेका थिए ।
०७४ कात्तिक ३० गते राधिका बस्नेतको ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गरेका थिए, जुन उनको अन्तिम शल्यक्रिया थियो । मंसिर पहिलो साता स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि मंसिर ५ गते उनी बेलायतको किंग्स अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।